Al-Shabaab oo fatwo ka soo saartay doorashada Somalia, Coronavirus & dagaalka bariga Afrika | Caroog News
Al-Shabaab oo fatwo ka soo saartay doorashada Somalia, Coronavirus & dagaalka bariga Afrika
March 26, 2020 - Written by caroog
Al-Shabaab ayaa soo gebagebeysay Shirweyne looga arinsanayay wax ay ugu yeertay Jihaadka ka socda bariga Africa oo ay kasoo qeybgaleen in ka badan 100 xubnood oo isugu jira culimo, odayaasha dhaqameedyo iyo hogaanka sare ee Xarakada Al-Shabaab, waxaana gunaanadkii laga soo saaray fatwo iyo bayaan lagu faah-faahinayey qodobadii kasoo baxay shirka.
Shirka oo socday muddo shan maalin ah laguna qabtay hool si heer sare ah loo qurxiyay ayaa waxaa kasoo baxay illaa shan qodob oo ay ka ka mid yihiin Xukunka dastuurka ay ku dhaqanto DF, Doorashooyinka dalka ku soo fool leh, cudurka Coronavirus iyo kuwo kale.
Fatwada ayaa lagu caddeeyey inay xaaraan tahay ka qeybgalka doorashooyinka dimuquraadiga, ku dhaqanka dastuurka DF.
Hoos ka akhriso qodobada ay soo saartay al-shabaab.
1-In Al-shabaab ay sii xoojiyaan dagaalka ay ku difaacayaan Diinta, Dalka iyo dadka Muslimiinta.
2- In dowladda federaalka iyo maamulada hoos taga ay yihiin Maamullo Diinta Islaamka ka baxay, waajibna ay tahay in lala dagaalamo.
3- Inay xaaraan tahay ka qayb qaadashada doorashada dalka laga qaban-qaabinayo 2021.
4- In laga hortago waxa loogu yeero nidaamka Federaalka, oo ah qorshe ujeedadiisu tahay in lagu kala qoqobo dalka, colaadihii sokeeye lagu soo celiyo.
5- In laga digtoonaado qulqulka ciidamada Itoobiya ee soo galaya dalka, tiro badan oo kamid ahna ay saldhigteen qaar kamid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka.
6- Waxaa bulshada Muslimka ah loogu baaqayaa inay ka digtoonaadaan cudurada faafa ee ku soo badanaya dunida sida Coronavirus iyo HIV-ga, kuwaasoo ay faafintoodu kaalin lixaadleh ka qaadanayaan ciidamada shisheeye ee dalka jooga.